Izikhokelo zoBumelwane: Izinto ezili-10 onokuthi ungazazi malunga neDowntown LA
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Indawo yeendwendwe » Izikhokelo zoBumelwane: Izinto ezili-10 onokuthi ungazazi malunga neDowntown LA
Kule minyaka imbalwa idlulileyo, umbono weDowntown Los Angeles utshintshe kakhulu.
Ngokuthontelana kweehotele ezintsha, iindawo zokutyela, iibhari, kunye neevenkile, ii-Angeleno ezininzi zingxamele ukutyelela indawo yasebumelwaneni ekhulayo ye-DTLA, kodwa wazi njani ukuba ungaya phi? Sijonge indawo ukuze sifumanise ukuba yintoni efanele ukujongwa, kwaye nazi izinto ezilishumi osenokungazi ngazo. edolophini LA.
Kukho ubugcisa boluntu ngaphezulu kunokuba ucinga.
Ukuthetha ngobugcisa boluntu, IDowntown ye-LA inesabelo sayo esilungileyo sezikhumbuzo kunye nemifanekiso ezima njengezibane kubahambi. Into yokuqala oyiqaphelayo xa ungena kwiSithili soBugcisa ngumsebenzi wobugcisa kawonke-wonke – kwaye ukuyo yonke indawo. IDowntown yindawo yobuncwane bobugcisa boluntu ukusuka kwimizobo emikhulu esemacaleni ezakhiwo ukuya kwimisebenzi emincinci kwiifestile, iibhentshi, kunye neengcango.
Iimpawu eziphambili kwiDowntownLA
Kukho imyuziyam epheleleyo (esimahla) eza kufunyanwa kwi-alleyway.
Ibizwa ngokuba yiGrand Central Art Centre, kwaye ibekwe kwindawo ephakathi kweSitrato esiPhambili kunye neSitrato saseSpring kunye nesi-2 kunye nesi-3 sezitalato. Le ndawo iphinde ibe yindlu yokusebenza nguShepard Fairey kunye noMark Dean Veca kwaye uye wabizwa ngokuba yi "Alley-Oop" ngenxa yobugcisa.
Kukho umfanekiso oqingqiweyo oziimitha ezili-140 ubude beeglasi.
I-LA Mural sesona sibini sipeyintwe sikhulu seHlabathi. Mkhulu kangangokuba unokuwubona xa umgama weemayile… kwaye ipeyintwe ecaleni kwesakhiwo, hayi nje umzobo oseludongeni ophantsi! Umculi uRobert Vargas wadala ngo-2008.
Ungafumana iqhekeza le dessert kunye nekomityi yekofu yakho e-Urth Caffe.
Indawo nganye esembindini inebhokisi yokubonisa ezaliswe liqela leepastries kunye needessert onokuthi uzithenge emva kokuba wonwabele isidlo sakho. Iidonathi, ii-croissants, ii-tarts, iikeyiki, iiqebengwana, iibrownies ... ukuba unokuzitya, ziyathengiswa!
UPixar uthanda idolophu yase-LA!
Ifilimu eshukumayo echukumisayo ethi "Up" yamiselwa kwisixeko esicingelwayo esinezinto ezininzi ezifanayo kwidolophu yase-LA kuquka imizobo emikhulu yangaphandle kwiindonga zesakhiwo, amakhaya ama-Victorian aguqulelwe ekubeni amagumbi, iimoto zesitrato ezithwele abantu edolophini ... kunye namakhaya anophahla olubomvu! Ifilimu yayikhokelwa nguPete Docter wase-LA, ohlala kwimbali yase-Angelino Heights phakathi kwamakhaya aliqela anembali awathengela usapho lwakhe emva kokwenza “iMonsters Inc.
IDowntown LA likhaya lokuloba ii-tacos.
Phakathi kwiminyaka yee-1970, usomashishini URalph Rubio wazisa i-taco yakhe eyaziwayo ngoku ye-Baja-style yentlanzi kwindawo yaseSan Diego, kwaye ngokukhawuleza, iindawo zokutyela zakhe zaqala ukuzoba imigca ejikeleze ibhloko. Ngo-1989, wavula indawo yokutyela e-Anaheim, kwaye ngo-1995, weza eLos Angeles. Xa indawo yokuqala ye-Rubio yedolophu yaseLos Angeles yavulwa kwi-9th kunye nezitalato ze-Hill kwi-1996, yaba yi-hit-kunye nelitye lenkcubeko.
ibhonasi: IDowntown LA sesona sithili sixakekileyo kwintshona yeUnited States, kwaye idolophu yase-LA ineyona ndawo iphezulu yoxinaniso lwamagumbi ehotele eSouthern California. Undoqo wembali weDowntown LA likhaya kumagumbi ehotele ngaphezulu kwenani lilonke lamagumbi eSan Diego's Hotel Circle, eSan Francisco's Union Square, okanye indawo yeMarike yePike yaseSeattle.
IDowntown LA likhaya lebhega yokuqala ye-In-N-Out. Ngo-1948, uHarry kunye no-Esther Snyder banike abathengi babo bokuqala ukusuka kwikhawuntara encinci ye-10-stool kwisakhiwo esingenamntu sase-Lily Tulip kwikona ye-Westlawn kunye ne-La Brea Avenues.
ITokyo encinci ayiyonxalenye yedolophu ye-LA- nangona ikumgama wokuhamba weSikhululo soManyano kunye neSithili sezeMali, iLittle Tokyo yindawo yayo encinci. Iyinxalenye yeLittle Tokyo Services Centre, Inc., umbutho owahlukileyo ongenzi nzuzo. Indawo yenkcubeko namhlanje eyaziwa ngokuba yiLittle Tokyo yasekwa ngo-1887 njengendawo yokuhlala yabemi baseJapan ababefuduke besuka eJapan kwaye babelikhaya kwidolophu yaseJapan echumileyo. Ngo-1909, uluntu lwabizwa ngokuba yi-East Los Angeles, kwaye ngo-1931 yaziwa ngokuba yiTokyo encinci. Ngo-1942, emva kokuvalelwa kwabantu baseJapan baseMelika, uluntu lwaphinda lwathiywa ngokutsha ukuze lwaziwe ngokuba yiBoyle Heights.
IHolo yeKonsathi yeDisney likhaya le-LA Philharmonic- enye yezona okhestra zaziwayo eHlabathini, nto leyo ethetha ukuba ujonge ukubona ezinye iimvumi ze-A-List ziza edolophini, le yenye yeendawo ekufuneka uzibeke iliso lakho.
Uhola wendlela we-10 awupheli edolophini – ukuba ngandlela ithile ukwazile ukuphoswa nguhola wendlela elishumi xa usendleleni eya edolophini LA, ungathatha i-Alameda St emantla apho idibana nohola wendlela ezintlanu oza kukubuyisela umva ngaphandle kwedolophu.
ISakhiwo saseBradbury sasiyindawo yokugcina izidumbu. Ngaphambili abahlaziyi basigcinile esi sakhiwo siyimbali ekubeni singadilizwa, sisebenze njengendawo yokugcina izidumbu ezilindele ukuchongwa kukarhulumente okanye uqhaqho emva kokuba bekhutshiwe eluvalelweni lwamapolisa.
Iibhulorho ezimbini ziwela uMlambo i-LA.
The I-Los Angeles Downtown News ibika ukuba ibhulorho yesitalato sokuQala yaqala ngo-1913. Le bhulorho yayisetyenziswa njengendawo yokungena oololiwe bokuthutha iimpahla ababesa impahla kwiindawo zokugcina iimpahla ezikufuphi nomlambo. Le bhulorho isasetyenziswa namhlanje kwaye idibanisa iSithili soBugcisa kunye neTokyo encinci. Ibhulorho yesibini, eyaziwa ngokuba yibhulorho yeSixth Street, yavulwa ngowe-1926, yaye imijelo yamanzi yamandulo yaseRoma yakhuthaza indlela eyakhiwe ngayo.
Kufuphi namazwe amaninzi
I-LAX sesinye sezikhululo zeenqwelomoya ezikufutshane kumazwe amaninzi (kungabandakanywa iMexico) eHlabathini, nto leyo eyenza kube lula ukuhamba kumazwe aphesheya ngamaxabiso afikelelekayo.
IDowntown LA inobusuku obuhle kakhulu.
IDowntown LA inobona busuku bugqwesileyo esixekweni. Iindidi zemivalo kunye neeklabhu zithetha ukuba kuhlala kukho into onokukhetha kuyo, nokuba ukwimo yetheko lomdaniso olonwabisayo okanye indawo epholileyo yokuxhoma nabahlobo. Idolophu yase-LA nayo ilungile yokusela imini.
Ayiyomfihlo into yokuba iDowntown LA ilikhaya kwezinye zezona ndawo zokutyela zibalaseleyo esixekweni. Yeyiphi indawo engcono yokusela imini? Ungonwabela ibhiya yezandla okanye iiwayini zalapha ekhaya ngesidlo sasemini okanye nge-brunch kwaye emva koko uphume uye kwi-cocktails ebusuku.